အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: အချစ်ရဲ့ အရသာ
Posted by တီချမ်း at 3:36 PM
အန်တီချမ်း October 19, 2010 at 4:19 PM
me: what do u think of my new post?
BS: jz get it... let me ...
Sent at 4:02 PM on Tuesday
BS: ကြိုက်တယ်။ ပေးချင်တာလေး လှတယ်။ အနောက်တိုင်းဆန်တယ်။
မုန့်ဟင်းခါတို့ ဘာတို့ က
me: ဒါပေမယ့် ငါပြောချင်တာကို နင်ရတယ်မှလား
BS: သေချာတာပေါ့ သယ်ရင်းရယ်
me: ဝက်တွေစားတဲ့ ပလာတာကြောင့် ဂျုံဈေးတွေ အလကားတက်တယ် နော့
:P October 19, 2010 at 4:21 PM
လူ့အသား အရသာက ပထမဆုံးတော့ ငန်မယ်ထင်တယ်။
Rita October 19, 2010 at 7:54 PM
ငန်မှာပေါ့ မမစင် ဂျီးတွေနဲ့ဟာ။
ရန်ကုန်မှာဆို ဖုန်ပိုပေါလို့ ရန်ကုန်ကလူဆို ပိုငန်ဦးမယ်။
Rita October 20, 2010 at 10:52 AM
လောလောဆယ် ဆိုတာရဲ့အောက်မှ ကျေးဇူးတင်ထားတာ ခုမှ မြင်တယ်။ ဘယ်တုန်းကတင်လိုက်တာလဲ။ ရေးဖြစ်သွားတဲ့ ပို့စ်ကရော ဘာလဲ။
ahlin October 20, 2010 at 5:46 PM
Dear Addy Chen,
I wont forget your rice and curry for me...Thanks million naw...
I am also big fan of your Blog and I still learning some idea from you...
You are incredible writer and I am so proud to meet you cos you are indeed well talented one I have ever seen in my life...
Hope to meet you again Aunty Chen....
May I know your email, please..I want to send mail to you via email....
Would you like to send yr address to me, I want to send My Card to you, my email is ahlineain84@gmail.com